မှတ်မထားမိပေမယ့် မှတ်သားမိနေတဲ့ ပထမများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မှတ်မထားမိပေမယ့် မှတ်သားမိနေတဲ့ ပထမများ
မှတ်မထားမိပေမယ့် မှတ်သားမိနေတဲ့ ပထမများ
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Sep 22, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 38 comments
နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီရေးလေ့ရှိသူများမှအပ ကျန်သူတို့မှာ မိမိတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေကို မှတ်မိချင်မှမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကျွန်မသိတတ်စအရွယ်မှာ ကိုယ်ပထမဆုံးသုံးဖြစ်တဲ့အရာတွေ၊ကိုယ့်အကြိုက်တွေရယ်
လို့အမှတ်တရမမှတ်သားပဲ အလိုလိုမှတ်မိနေသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိနေပါတယ်။
ထိုအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာထဲက မိမိကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ ၀ါသနာပါရာအကြောင်းအရာတွေထဲက
-ပထမဆုံးကြိုက်မိတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ= Journey To The West
-ပထမဆုံးကြိုက်မိတဲ့ ရုပ်ပြောင်ကာတွန်း=ကာတွန်းပိုးဇာရဲ့ မောင်မောင်ဇာနဲ့အမွှာညီအစ်မဇာတ်ကောင်
-ပထမဆုံးကွန်ပြူတာစသုံးစဉ် သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Window= Window98
-ပထမဆုံးကြိုက်မိတဲ့ Software= Adobe Page Maker(စသုံးဖြစ်တဲ့ဗားရှင်း-6.1)
-ပထမဆုံးအင်တာနက်နဲ့စတင်ထိတွေ့ရချိန်သုံးဖြစ်တာက= Google Search
-ပထမဆုံးသတင်းနဲ့သတင်းဓာတ်ပုံများပုံမှန်ဝင်ကြည့်ကူးယူသိမ်းဆည်းဖြစ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်=The Mandalay Gazette
ခေတ်ကာလတွေရွေ့လျားလာတာနဲ့အမျှ မိမိရဲ့အကြိုက်တွေ၊သုံးစွဲရတဲ့အရာတွေဟာ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာပေမယ့်
ပထမဆုံးသော အကြောင်းအရာများစွာထဲက အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလောက်စရာလေ; တွေကိုတော့
ပထမနေရာ အရင်လာဦး တာ။
ညလေးတို့ငယ်တုန်းကလည်း ရေးပေးပါတွေ၊တနေ့တာတွေ တော်တော်အရူးထခဲ့တာမွားရဲ့
1992 လောက်ထဲက တီဗီကြည့်တတ်နေပီဆိုတော့ မနန်းတော်ရာသူက
ကျော့်ထက် ဆယ်နှစ်လောက်ကြီးတာပေါ့.. ကျော်ဆို… ၉၂ လောက်ကဆို..
အော် အားဂျီးမားလိုက်သမှ ဆံပင်ဖြူတောင် ၁ချောင်းစ၊၂ချောင်းစထွက်နေပါပေါ့။
ကျုပ်ကအားဂျီးမားဆို ညည်းက အားဂျီးချီးး
မိုက်ကယ် တို့ 
ဂျက်လီ တို့ကြိုက်မိတာ တူတယ်ဗျို့ 
ကျွန်တော် ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဝတ္ထုကတော့
အဲဒီ စာအုပ်ကို အငှားဆိုင်က ငှားဖတ်မိကတည်းက
စာပေ ကို စိတ်ဝင်စားရာကနေ ချစ်သွားပါလေရော
တာရာမင်းဝေက အစ်မတို့ပထမနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘွမှ စဖတ်ဖြစ်တာအလင်းဆင်းရဲ့
စဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်က ပန်းခေတ်ကလမင်း လေ
ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ Little House on the Parry ( စာလုံးပေါင်းမှားလောက်တယ် ) အဲဒါပထမဆုံးကြိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့။ ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့မင်းသားက ကျော်သူ အဆိုတော်က ဇော်ဝင်းထွတ် ပထမဆုံးဝတ္ထုကတော့ လမင်းမိုမိုရဲ့မောင်။ မှတ်မတာလေးတွေပေါ့လေ
မွသဲပြောတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတော့မကြည့်ဖူးဘူး။လမင်းမိုမိုရဲ့ မောင် ကတော့အကြိုက်တွေထဲကတစ်ခုပဲ။
လမင်းမိုမိုကိုစဖတ်ဖူးတာက “အနုံ”နဲ့လေ နောက်မှအဟောင်းတွေပြန်ရှာဖတ်မိတာ။
ဒီရွာရဲ့ မန်ဘာတွေထဲက ရွာအပြင်မှာ ပထမဆုံး ဆက်သွယ်ခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူက ရွာသူ အိတုံ။
ဒီရွာရဲ့ မန်ဘာတွေထဲက ရွာအပြင်မှာ လူကိုယ်တိုင် ပထမဆုံး တွေ့ဆုံဖြစ်သူက မန်းက ကိုပေါက်။
ခင်ခ ပထမဆုံးပိုစ့်ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာက သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေးနှင့်ပက်သက်သော သတင်း။
ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စာမေးပွဲကျဖူးတာက ၁၀တန်း၊
ရန်ကုန်ကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာက ၁၉၇၅
ပထမဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀တ္ထုတွေ ကာတွန်းတွေတော့ မှတ်မိတော့ဘူး
စကြိုက်မိတဲ့ကာလ= ဘယ်တုန်းကတုန်းဆိုတော့ ၄ တန်းလားပဲ။ ဒါမဲ့ ဂျော်ဂျနီဒက်(ပ) ကို ချောမှန်းသိနေပြီ။ ခွိ။
စတင်ကြိုက်မိတဲ့ကာလ=မှတ်မိဘူးးးး သူ ဆွဲတဲ့ မိန်းခေးပုံလေးတွေ ကြိုက်တာ။
စကြိုက်မိတဲ့ကာလ=၁၉၉၃ ၀န်းကျင် (တူတူပဲ)
-ပထမဆုံးစကြိုက်မိတဲ့နိုင်ငံခြားမင်းသား=ဂျော်နီဒက်(ပ) ပါဆို။ ဟိဟိ
-ပထမဆုံးစကြိုက်မိတဲ့ဝတ္ထု= တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် “သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင်”
စဖတ်မိတဲ့ကာလ=၁၉၉၁ ခုနှစ် လောက်ထင်တာပဲ။
-ပထမဆုံးကွန်ပြူတာစသုံးစဉ် သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Window= Window97
-ပထမဆုံးကြိုက်မိတဲ့ Software= မရှိ။
ကျန်တာတော့ မရှိလို့ မဖြေတော့ဘူးးးး
သော်သော် ဖောမက် အတိုင်းပဲလိုက်လိုက်တယ်။
ညီမက စိုးသူနဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကိုကြိုက်တော့ ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတာ။
ပထမဆုံးတွေကို ပြောတော့ ပြောချင်သား
ပထမဆုံး ကျတဲ့ စာမေးပွဲကတော့
ထိပ်ဆုံးကြိုက်မိတဲ့မင်းသားက. မဲလ်ဂစ်ဆင် ဗျ. နောက်ပိုင်း တွမ်ဟန့်စ် ပိုကြိုက်သွားတယ်.
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကျော်လာမှ ဂျောနီဒတ်ပ် ကြိုက်တာရယ်. အဲ့ ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုစ့်ပြတ်အောင်
လေ့လာဖြစ်သွားတယ်. ငိငိ. ဆံပင်တောင် သူ့ဇာတ်ကောင်ပုံစံအတိုင်းထားတဲ့အထိပါဆို.
ထိပ်ဆုံးဖတ်တဲ့ ဝတ္ထုကတော့. စာရေးဆြာနာမည်မေ့နေပီ.
ဇာတ်လိုက်မင်းသားခညာ. ဂွကျတာပေါ့ဗျာ. အတော်ပွေလီတဲ့စာရေးဆြာ.
ဝူခုံးကြိုက်ခဲ့တာ ထိပ်ဆုံးကတော့တူသဗျ. ဒါပေသိ. နောက်ပိုင်း. ကောကျင့်ကိုပိုကြိုက်သွားတယ်
ရင်းနှီးတဲ့ စီလုပ်အူးလေးတယောက်က. သံသေတ္တာကြီးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ ဝတ္ထုတွေထုတ်ပေးတယ်လေ
ကောကျင့် ဝမ်ခမ်းနဲ့ ယုံအော်ကို မျိုးချစ် မျိုးသစ် နဲ့ ကလျာ ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ ဖတ်ဖူးသပေါ့ဗျာ.
စီလုပ်သိုင်းဝတ္ထုကို ဗမာနာမယ်တွေနဲ့ထိပ်ဆုံးဖတ်ဖူးတာ ဆိုပါတော့
အမှတ်မမှားရင် ဆြာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းကြွယ် ထင်တယ်.
ထိပ်ဆုံး စကြိုက်ဖူးတဲ့ မင်းသမီးကတော့. သင်ချာကြီးပါ.
ထိပ်ဆုံးစကြိုက်ဖူးတဲ့အဆိုတော်ကတော့ ဘိုထီးဖြစ်မယ် ထင်တယ်
ထိပ်ဆုံးစကြိုက်တဲ့သီချင်းက. မြင်းလှည်းသမားလည်းအချစ်နဲ့ပါ. တဲ့.
နောက်ပိုင်း ဦးစိုး(လွှမ်းမိုး) ကိုပိုကြိုက်ပီး. ကိုငှက် နဲ့ကိုညီထွဋ် ပိုကြိုက်သွားတယ်
ထိပ်ဆုံး စကြိုက်မိတဲ့ ယဲဇားကတော့.
ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့ရည်းစား = ခြင်္သေ့ကျွန်းလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်မယ် အစုတ်ပလုတ်မကြီး
ဒုတိယကြိုက်တဲ့ရည်းစား = လေကြောင်းလိုင်းစနစ်က လူဆိုးမကြီး
တတိယကြိုက်တဲ့ရည်းစား နဲ့လက်ရှိရည်းစား = မြန့်ကျန့်ပြည်နယ် စီးပွားရေးမြို့တော်နာမည်နဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက ကချင်မကြီး အာဟိ…
ပထမဆုံးအလုပ် = ကုလားလေကြောင်းလိုင်း
( ငါ့နှယ့်..လေနဲ့ကိုမလွတ်နိုင်ဘူး…အာဟိ )
ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့မင်းသမီး = အီမာဝပ်ဆန်…
( ဟယ်ရီပေါ်တာကားစပေါ်တုန်းက ပိစိလေးရှိသေးတယ်…အဲ့ကတဲက ရန်လုပ်တာ အာဟိ )
အမလေး တူညားဒွေလိုပထမတင်မကဘူး။ဒုတိယ၊တတိယတွေပါအဆစ်ကြေငြာတွားတာ များလိုက်တဲ့ရဲဇားတွေ
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကသာ မိမိရဲ့အကြိုက်ပေါင်းများစွာဆိုရင် ဒိထက် ထပ်ထွက်လာဖို့ရှိရင်ရှိအုံးမယ်
ရွာမှာ ပထမဆုံး Post ရေးတော့ ပထမဆုံး မှတ်ချက်ပေးသူ က တော့
မီးကြိုက် သူ ကြိုက်မီး – ကြီးမိုက် ပါဗျား။
ရွာထဲပို့စ်တင်တော့ ပထမဆုံးအားပေးသူက ကိုပေနဲ့ကထူးဆန်း ဘူအရင်လဲတောင်မှတ်မိတော့ဘူး။
သများရဲ့ မောင်ဂလေး နှာဘူးလေး အရင် လာ ကော်မန့်ပေးတာ။။
ဖဘမှာ ပထမဆုံး Add လိုက်တာက မောင်ဂလေး သဂျိုးလေးးးး
မီး လည်း ဦးဖောကို အမှတ်ရတုန်းပဲ။ဟဲဟဲ။ ဦးဖောကသမီးလေးတွေအကြောင်းသိပ်ပြောတာကိုး။ နောက်တာပါ.. ဦးဖောရဲ့ ခရီးသွားပို့တွေရယ် နိုင်ငံရပ်ခြား ဗဟုသုတ တွေရယ်.အကျင့်စရိုက်နဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေ ခြားနားတာတွေရယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ညံ့ကြေးကို ရင်နာဆုံးပဲ။
အဘဖော Foreign Resident ကိုပြောတာလား
အဘဖောကတော့ ရောက်ရောက်ချင်းသတင်းကြီးစေတာမို့ မမေ့နိုင်စရာပါပဲ
ဟဲ့ ပလုတ်တုတ် ။ ပထမ များဆိုပြီး အေးဆေး ဖတ်လာတာ ။
ဘယ်လိုဖစ်ပြီး ၊ သာမီးလေးတွေ ရဲ့ ပထမ တွေကြားထဲ ၊
ငါ့ နာမည်ကြီးက ကန့်လန့် ကန့်လန့် ပါလာပါလိမ့် ။
( ရင်ကို ခုန်သွားတာပဲ ။ ဟီ ဟိ ။ နောက်ထှာ )
အဘ ရဲ့ မှတ်မိသလောက် ပထမ ကိုရေးရမယ် ဆိုရင်တော့ ။
ပထမ ရည်းစား = အဘ ဘဝ ရဲ့ လက်ရှိ ပဲ့ကိုင်ရှင်ပါပဲ ။
( အဟိ ၊ ဒုတိယ ရည်းစား လဲ မရှိပါဘူးကွယ် )
ရုပ်ရှင်ကတော့ Tom & Jerry
မင်းသား.. လင်းထင်.. ဟိုတနေ့ကမှကြည့်လိုက်ရတာ..
နိုင်ငံခြားမင်းသား.. ပထမဆုံးဂျိမ်းဘွန်းမင်းသားကြီးထင်တယ်.. မိုက်ဒလယ်
၀တ်ထု.. ၀င်းဝင်းလတ်ရဲ့အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲ နဲ့ နုနုရည်အင်းဝရဲ့ တောင်ပြုံးဇတ်လမ်း
အင်တာနက်ကို MPT က လိုင်းဖုန်းနဲ့သုံးရတဲ့ Dial up စနစ်ကတည်းကစသုံးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ၀န်းကျင်ပေါ့.. အဲဒီအချိန်က ဖွင့်သမျှဆိုက်မပွင့်.. အနီရောင်နဲ့ access denied ဆိုတာပဲပေါ်တယ်..
ပထမဆုံးကြိုက်မိသော ဘောလုံးသမား.. ဘက်ခမ်း :loll:
ွှTom & Jerry ကတော့ကြိုက်တယ်။လင်းထင်ဆိုတာကတော့ အခုမှပဲကြားဖူးတာ
ဂျိမ်းစဘွန်းတွေကများတယ် ပီးယက်ဘရော့စ်နန် ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။
အနော်ကြောင်ကြီးလည်း ပထမဆုံး ထုတာ ပြောဂျင်ဒယ်.. အဲဒုံးဂ အိမ်မှာ လူဂျီးဒွေ အရှိဗူး… မနက်စာ ပျားရည်ဆမ်း ကြက်ဥပူတင်းနဲ့ နွားနို့သောက်ထားတော့ အားသိပ်ရှိနေဒယ်.. ပီးတော့ ခလေးလည်း အဟုတ်တော့ဗူး.. ဆိုဒေါ့ ဟိုဟာစမ်းချင် ဒီဟာစမ်းချင် ကလိဂျင်နေဓာတ်ပီ… တိုတိုပေါရရင် လူမရှိဒုံး ထုကြည့်မဟဲဆိုပီး ရေချိုးခန်းဝင် ထုလိုက်တယ်…..။ ပထမဆုံးမို့ ပီးလည်းပီးရော လျှာထွက်ရောပဲ…။ အဲဒီနေ့တော တသက်မမေ့တော့ဗူးဗျာ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိလာတဲ့ ပထမဆုံး နေ့ဆို အမှားဗူး……. ဒဗဲ ဒဗဲ… ကြုံလို့ ဝင်ပေါဒါ… ခွေးလွှတ်ကြပါ…။ ……….
ဆောဒီး ကျန်သွားလို့.. အဲဒီ့ကျေးဇူး အခုကျနော် အိမ်ဆောက်တဲ့ ကန်ထရိုက်တာဂျီး ဖြစ်နေပီ… ဒါပေမဲ့ တူနဲ့တော့ မထင်နဲ့…. ပိုင်ရိုက်သွင်းနေဗီဂျ……။ ဝုန်း ဝုန်း…
အနော် မှတ်မိတဲ့ ပထမဆုံးတွေကတော့ ဘုစုခရုက စပြောရမယ်ဆိုရင်-
ပထမဆုံးစားဖူးတဲ့ သရေစာ- လျှာပေါ်ဝဲမုန့်
ပထမဆုံးကြည့်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းကား- Tom & Jerry
ပထမဆုံးကြည့်ဖူးတဲ့ သိုင်းကား- Once Upon Time in China III(ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဝမ်ဖေးဟုန်လို့ပဲ အလွတ်တကူသိကြတယ်)
ပထမဆုံးကြည့်ဖူးတဲ့ Hollywood Movie: Speed
ပထမဆုံး ခရီးထွက်ဖူးတဲ့ဒေသ : ပုဂံ(ဆယ်တန်းအောင်တုန်းက တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်ဖြစ်တယ်)
ပထမဆုံး ရည်းစားထားဖူးတဲ့ အချိန် : ၇တန်း ကျောင်းသားဘဝတုန်းက သူများမြှောက်ပေးတာ လျှောက်လုပ်ရင်းနဲ့ ရည်းစားထားတတ်သွားခြင်း (သို့ပေသိ ခုချိန်ထိ လူအများရှေ့မှာ ဒါငါ့စော်ကွလို့ မကြွားနိုင်သေး)
ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာနဲ့ စတင်ထိတွေ့ဖူးတဲ့ အချိန်: ၈တန်း ကျောင်းသားဘဝ နှစ်စ
ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့ ခုနှစ် : ၆တန်း ကျောင်းသားဘဝ 2000 ခုနှစ် (Self study လုပ်ပြီး နာမည်တွေ ပေါင်းကြည့်တဲ့ အချိန်)
ပထမဆုံး ချက်တင်ထိုင်ဖူးတဲ့ ခုနှစ် : QQ နဲ့ ချက်တင်စထိုင်ဖူးတဲ့ 2006 ခုနှစ်
ပထမဆုံး G-talk ကို စတင်အသုံးပြုတဲ့နှစ် : 2010 ဒီဇင်ဘာ X’ mas မတိုင်ခင် စတင်အသုံးပြုသည်။
ပထမဆုံး Facebook နဲ့စတင်ရင်းနှီးတဲ့ နှစ် : 2012 မတ်လ 11 ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည် ခီညော်။
တော်သေးဘီ ခွက်ဒစ်တူ အဘဖော် :boss: